Bentakostiga – Kaaliyaha ayaa u yimaada inuu bixiyo Awood iyo Hanuun - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Suuradda Al-Balad (Suuradda 90 – Magaaladu) waxa ay tilmaamaysaa markhaati magaalada oo dhan ah iyo suuradda An-Nasr (Suuradda 110-Taageerada Rabbaaniga ah) waxay odorosaa dad badan oo u imanaya cibaadada xaqa ah ee Eebbe.
Waxaan marag uga dhigayaa magaaladan, Adiguna waxaad tahay xor magaaladan. (Al-Balad 90:1-2).
Markay yimaaddo Gargaarka Eebe iyo Liibaan, ood Aragto Dadka oo Diinta Eebe u galaya Kooxo, oo ku Tasbiixsan Mahadda Eebahaa, Dambi Dhaafna bari Eebana waa toobad aqbal badane. (Suuradda An-Nasr 110:1-3).
Isla konton maalmood ka dib sarakiciddii Isa al Maasiih NNKH waxaa rumowday riyadii lagu qabtay suuradda Al-Balad iyo suuradda An-Nast. Magaaladu waxay ahayd Yeruusaalem, xertii Isa al Masihna waxay ahaayeen nimankii xorta ahaa ee markhaatiga u ahaa magaaladaas, laakiin waxay ahayd Ruuxa Rabbiga oo dhex wareegaya dadkii badnaa ee magaaladaas ku sugnaa taas oo sababtay damaashaadka, ammaanta iyo cafiska. Maalintaas ayaa sidoo kale innagu maanta waaya-aragnimadayna, taas oo aynu barannay marka aynu fahanno taariikhda maalintan gaarka ah.
Nabi Isa al-Masih NNKH wuxuu ahaa iskutallaabta lagu qodbay Kormaridda laakiin markaas ka sara kacay kuwii dhintay Axaddii xigtay. Guushaan uu ka helay geerida ayuu Hadda waxay siisaa hadiyadda nolosha qof kasta oo heli doona. Oo markay afartan maalmood xertiisii ​​la joogeen, si ay u hubiyaan sarakiciddadiisa. dabadeed wuxuu u baxay samada. Laakiin ka hor intuusan kor u qaadin wuxuu bixiyey tilmaamahan:
Amar kasta oo samada iyo dhulka joogaba waa lay siiyey; Haddaba taga oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga, oo ku baabtiisa magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuskaa, oo bara inay xajiyaan wax kasta oo aan idinku amray. Oo sida xaqiiqada ah weligayba waan idinla joogaa ilaa dhammaadka wakhtiga dunidu. ( Matayos 28:19-20 )
Wuxuu u ballan qaaday inuu mar walba la joogi doono, haddana wax yar ka dib wuu ka tegey markuu samada u baxay. Sidee buu weli iyaga ula jiri karaa (iyo weliba annaga) ka dib markuu kor u kacay?
Jawaabtu waxay imanaysaa wixii dhacay wax yar ka dib. Cashadii ka hor intaan la xidhin wuxuu ballan qaaday imaatinka Gargaaruhu. Konton maalmood ka dib sarakicidiisa (iyo 10 maalmood ka dib markii uu kor u qaaday) ballankaas waa la oofiyey. Maalintaan waxaa loo yaqaan Maalinta Bentakostiga ama Axadda Bentakostiga. Waxay u dabbaaldegtaa maalin cajiib ah, laakiin maaha oo kaliya waa maxay dhacay maalintaas laakiin Goorma iyo sababta waxaa dhacday in ay muujiso calaamada Alle, iyo deeq xoog leh oo kugu habboon.
Maxaa dhacay Bentakostiga
Dhacdooyinka oo dhami waxay ku qoran yihiin Kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka 2 ee Kitaabka Quduuska ah. Maalintaas Ruuxa Quduuska ah ee Eebe wuxuu ku soo degay raacayaashii ugu horreeyay ee Nabi Isa al Masih NNKH, waxayna bilaabeen inay ku hadlaan luqado ka kala yimid daafaha Caalamka. Waxay abuurtay buuq iyo sawaxan in kumaan kun oo wakhtigaas Yeruusaalem ku sugnaa ay u soo baxeen inay arkaan waxa dhacaya. Dadkii isu soo baxay hortooda, Butros wuxuu ku hadlay farriintii injiilka ee ugu horreysay oo ‘maalintaas waxaa tiradoodii lagu daray saddex kun’ (Falimaha Rasuullada 2:41). Tirada injiilka raacday ayaa sii kordhayay ilaa maalintii Bentakoste Axada.
Soo koobiddan Bentakostiga ma dhammaystirna. Sababtoo ah, sida dhacdooyinkii kale ee Nebiga, Bentekoste ayaa dhacay isla maalintaas oo ah Xaflad ka bilaabantay Tawreed waagii Nebi Muuse CSW.
Bentakostiga ka Taurat Muuse
Muuse CSW (1500 BC) ayaa la sameeyay dhowr ciidood oo la xuso sanadka oo dhan. Iidda Kormaridda waxay ahayd iiddii ugu horraysay ee sannadka Yuhuudda. Isa ayaa iskutallaabta lagu qodbay iidda Kormaridda. Wakhtiga saxda ah ee uu dhimanayo ilaa allabarigii baraarka Kormaridda ayaa calaamad inoo ah.
Iidda labaad waxay ahayd iidda Midhaha ugu horreeya, Iyo waxaan aragnay sida nabiga loo soo sara kiciyay maalinta ciidaan. Maaddaama sarakicistiisii ​​ay ku dhacday ‘Midhihii hore’, waxay ahayd ballan in sarakiciddayadu ay raaci doonto Kuwa isaga isku halleeya oo dhan. Sarakiciddiisu waa ‘midhaha hore’, sidii magaca iidda wax sii sheegay.
Si sax ah 50 maalmood ka dib axada ‘ midhaha hore’ Taurat waxay u baahnayd Yuhuudda inay u dabaaldegaan Bentakostiga (‘Pente’ ee 50). Markii hore ayaa loo yeedhay Iiddii toddobaadyada tan iyo markii la tiriyey toddoba toddobaad. Yahuudda ayaa 1500 oo sano u dabaaldagayay Iidda toddobaadyada waqtigii Nebi Ciise Al Masih NNKH. Sababta ay u joogeen dad ka kala yimid adduunka oo dhan si ay u maqlaan farriinta Butros maalintaas Ruuxa Quduuska ah ayaa Yeruusaalem ku soo degay si sax ah sababtoo ah waxay halkaas u joogeen si ay u dabaaldegaan Bentakoste ee Taurat.. Maanta Yuhuuddu waxay sii wadaan inay u dabaaldegaan Bentakostiga laakiin waxay u yaqaanaan Shavuot.
Waxaan akhriyey in Taurat sida ay Iiddii toddobaadyada waxay ahayd in la xuso:
Waxaad tirisaa konton maalmood ilaa maalinta ka dambaysa sabtida toddobaad, oo dabadeedna waxaad keentaa qurbaan hadhuudh cusub xagga Rabbiga. Meel kasta oo aad deggan tahayba waxaad ka keentaa laba xabbadood oo ah eefaah toban meelood loo dhigay labadiis meelood oo bur wanaagsan ah oo khamiir lagu dubay, taasoo ah qurbaan la ruxruxo. midhaha ugu horreeya xagga Rabbiga. (Laawiyiintii 23:16-17)
Saxnimada Bentakostiga: Calaamad ka timid xagga Eebbe
Waxaa jira waqti sax ah oo Bentakostiga markii Ruuxa Quduuska ah ku soo degay dadka tan iyo markii ay dhacday on isla maalintaas sida Iiddii toddobaadyada (ama Bentakostiga) ee Taurat. The iskutallaabta lagu qodbay Isa al Masih oo ka dhacaya Iidda Kormaridda, isaga sarakicidda ka dhacaya Festival FirstFruits, iyo imaatinka Ruuxa Quduuska ah oo ku yimid Iiddii toddobaadyada, waxay inooga yihiin calaamado cad cad xagga Alle. Maalmo badan oo sannad gudihiis ah maxaa iskutallaabta, sarakicidda, iyo ka dib imaatinka Ruuxa Quduuska ahi u dhacayaan si sax ah maalin kasta oo ka mid ah ciidaha saddexda gu’ga ee Taurat, marka laga reebo haddii tani ay tahay inuu na tuso qorshihiisa?
Dhacdooyinka Injiilku waxay si sax ah u dhaceen saddexda Ciidood ee Gu’ga ee Tawrada
Bentakostiga: Kaaliyaha wuxuu siinayaa awood cusub
Markii uu sharaxayay calaamadaha imaatinka Ruuxa Quduuska ah, Butros wuxuu tilmaamay wax sii sheegidda nebi Yoo’eel oo saadaaliyay in maalin uu Ruuxa Ilaah ku soo shubi doono dadyowga oo dhan. Dhacdooyinkii maalinta Bentakoste waxay rumeeyeen wax sii sheegiddii.
Waxaan soo aragnay sida nebiyadu noogu waxyoon dabeecadda harraadka ruuxiga ah ee inoo horseedaya dembiga. Nebiyadu sidoo kale waxay saadaaliyeen imaatinka a Axdi cusub halkaas oo sharciga lagu qori doono gudaha qalbiyadeena, ma aha oo kaliya looxyada dhagaxa ah ama buugaagta. Kaliya haddii sharciga qalbiyadeenna ku qoran yahay ayaan awood iyo karti u yeelan lahayn inaan sharciga raacno. Imaatinka Ruuxa Quduuska ah ee maalinta Bentakostiga si uu u dhex noolaado rumaystayaasha waa oofinta Ballanqaadkan.
Mid ka mid ah sababaha Injiilku u yahay ‘war wanaagsan’ ayaa ah inuu bixiyo awood si nolol wanaagsan loogu noolaado. Noloshu hadda waa a midnimada Alle iyo dadka. Midawgani waxa uu ku dhex jiraa Ruuxa Ilaah – kaas oo bilaabmay Axaddii Bentakoste ee Falimaha Rasuullada 2. Waa warka wanaagsan in nolosha hadda lagu noolaan karo heer ka duwan, iyada oo xidhiidh lala yeesho Ilaah xagga Ruuxiisa. Ruuxa Quduuska ah wuxuu ina siinayaa hanuun gudaha ah oo run ah – hanuuninta Ilaah. Baybalku wuxuu u sharaxay sidatan:
Oo imminka waxaad maqasheen runta ah dadkii aan Yuhuudda ahayn oo ah injiilka in Ilaah idin badbaadinayo. Oo markaad Masiixa rumaysateen, isagu wuxuu idinku aqoonsaday inaad kuwiisa tihiin markuu Ruuxa Quduuska ah idin siiyey, kan uu waa hore idiin ballanqaaday. Ruuxu waa dammaanad Ilaah u leeyahay inuu ina siin doono dhaxalkii uu inoo ballanqaaday oo uu inoo soo iibsaday inaynu dadkiisa ahaanno. Wuxuu sidaas u yeelay si aannu u ammaanno oo u ammaanno isaga. ( Efesos 1:13-14 ) .
Ruuxa Ilaah oo Ciise kuwii dhintay ka soo sara kiciyey ayaa idinku dhex nool. Sida Ilaah Ciise Masiix kuwii dhintay uga sara kiciyey, jidhkiinna dhimanayana wuxuu ku noolayn doonaa Ruuxan idinku dhex jira. ( Rooma 8:11 )
Ma aha oo kaliya, laakiin annaga qudheenna, kuwaas oo haysta midhaha ugu horreeya Ruuxa oo ka taahaa gudahayaga innagoo aad u sugayna ilmo-badhsashadiisa oo ah furashada jidhkeenna. ( Rooma 8:23 )
Ruuxa Ilaah ee ku dhex jira waa midhaha labaad ee ugu horreeya, sababtoo ah Ruuxu waa horudhac – dammaanad – dhammaystirka isbeddelkeena ‘carruurta Ilaah’.
Injiilku wuxuu bixiyaa nolol cusub oo aan ahayn isku dayaya-laakin-ku guul daraystay ilaalinta Sharciga. Mana aha nolol badhaadhe ah oo lagu helo hanti, mansab, maal iyo dhammaan waxyaalaha kale ee lagu raaxaysto ee adduunyada. oo uu Saleebaan madhnaan helay. Taa beddelkeeda, injiilku wuxuu bixiyaa nolol cusub oo badan isagoo Ruuxa Ilaah qalbiyadeenna ku jira. Haddii Alle ina siiyo in uu deggo, na xoojiyo oo ina hanuuniyo – taasi waa inay noqotaa war wanaagsan! Bentakoste ee Taurat, oo leh dabbaaldegga rootiga wanaagsan ee lagu dubay khamiirka ayaa sawiray noloshan soo socota. Saxnimada u dhaxaysa Bentakostiga Hore iyo Kan Cusub waa calaamad cad in tani ay tahay qorshaha Alle si aan u helno nolol badan.
Soo deji PDF dhammaan calamadaha Al Kitaab oo ah buug ahaan